भारी मतका साथ दोस्रोपटक न्युजिल्यान्डको प्रधानमन्त्री बनिन् जासिन्डा आर्डेन - Gaunbeshi
भारी मतका साथ दोस्रोपटक न्युजिल्यान्डको प्रधानमन्त्री बनिन् जासिन्डा आर्डेन
Posted on १ कार्तिक २०७७, शनिबार १६:२२ Author Gaunbeshi Comment(0)
जासिन्डा आर्डेन दोस्रोपटक न्युजिल्यान्डको प्रधानमन्त्री बनेकी छिन्।
भारी मतका साथ जासिन्डा दोस्रोपटक प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचिन भएको अन्तर्राष्ट्रिय संचारमाध्यमले जनाएका छन्।
सीएनएनका अनुसार ८७ प्रतिशत मत गणना भइसक्दा आर्डेनको लेबर पार्टीले ४८.९ प्रतिशत मत प्राप्त गरेको छ।
विपक्षी नेसनल पार्टीले २७ प्रतिशतभन्दा कम मत पाउने प्रक्षेपण गरिएको छ। जासिन्डा आर्डेनले कोरोना भाइरसलाई नियन्त्रण गर्न देशमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेकी थिइन्।
कोरोनाको संक्रमणलाई शुन्यमा झार्ने पहिलो राष्ट्रपनि न्युजिल्यान्ड नै हो। हालसम्म न्युजिल्यान्डमा २ हजारभन्दा कममा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। एजेन्सी
अजरबैजान र अर्मेनियाबीच युद्धविराम, युद्धमा ४०० जनाले ज्यान गुमाए
Posted on २४ आश्विन २०७७, शनिबार १५:५९ Author Gaunbeshi
मस्को, असोज २४ । अजरबैजान र अर्मेनियाबीच शनिबार युद्धविरामका विषयमा सहमति भएको बताइएको छ । यी दुई देशबीच युद्धविरामको सम्झौता भएको र शनिबारदेखि युद्धविराम लागू हुने रुसी विदेशमन्त्रीले जानकारी दिनुभएको हो । रुसी राजधानी मस्कोमा गएको करिब १० घन्टासम्म यी दुई देशबीच वार्ता भएको थियो । उक्त वार्तापछि युद्धविरामको सहमति भएको रुसी विदेशमन्त्री सेर्गेई लाभरोभले […]
अफगानिस्तानमा भागदौडमा परी १२ जना महिलाको मृत्यु
Posted on ६ कार्तिक २०७७, बिहीबार ०७:४१ Author Gaunbeshi
जलालावाद, अफगानिस्तान -अफगानिस्तानको जलालावादमा आज अपरान्ह भएको भागदौडमा परेर कम्तीमा पनि बाह्र जना महिलाको ज्यान गएको अधिकारीहरुले जानकारी दिएका छन् । उनीहरुका अनुसार जलालावादमा रहेको पाकिस्तानी कन्सुलेटमा लागेको ठूलो भिडभाडका क्रममा सो भागदौड भएको थियो । यहाँका सञ्चारमाध्यमहरुले जनाएअनुसार ठूलो संख्याका नागरिकहरु प्रवेशाज्ञा लिनका लागि लाम लागेर बसेका थिए । सोही क्रममा अकस्मात भागदौड भएको […]
फिनल्याण्डमा १६ बर्षे किशोरी एक दिनका लागि प्रधानमन्त्री बनिन्!
Posted on २२ आश्विन २०७७, बिहीबार १५:४७ Author Gaunbeshi
एजेन्सी । फिनल्याण्डमा एक १६ बर्षे किशोरी एक दिनका लागि प्रधानमन्त्री बनेकी छन्। जलवायु परिवर्तन र मानव अधिकार सम्बन्धी मुद्दाहरूबारे अभियान चलाईरहेकी १६ बर्षीया आभा मुर्टोलाई त्यहाकी प्रधानमन्त्री सन्ना मरिनले एक दिनका लागि प्रधानमन्त्री बनाएकी हुन। प्रधानमन्त्री सन्ना मरिनले बालिकाहरूको अधिकारलाई प्रोत्साहन गर्न एक दिनका लागि ती किशोरीलाई प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी दिएको बताइएको छ। लैंगिक […]
१२ वर्षे बालकले करोडौँ वर्ष पुरानो डाइनोसरको दुर्लभ अस्थिपञ्जर फेला पारे
कोभिड-१९ संक्रमणका कारण मृत्यु हुनेको संख्या ७ सय नाघ्यो, पछिल्लो २४ घण्टामा ४३९१ नयाँ संक्रमित
अर्को वर्ष पनि विद्युत शुल्क घटाउँछौंः ऊर्जामन्त्री पुन
Posted on २७ आश्विन २०७७, मंगलवार १४:५५ Author Gaunbeshi
रोकिराखेको टिपरमा ठोक्कियो बस, चालकको मृत्यु
Posted on ४ कार्तिक २०७७, मंगलवार १६:३२ Author Gaunbeshi
Posted on ६ माघ २०७७, मंगलवार २०:०९ Author Gaunbeshi
भारतीय स्थलसेनाध्यक्ष नरावणेको नेपाल भ्रमण सफल बनाउने तयारी
Posted on २ कार्तिक २०७७, आईतवार ०८:५९ Author Gaunbeshi
नयाँ स्वरुपको कोरोना बाट विश्वका ६० देशमा पुग्यो
मालपोतका नासु र बिचौलिया ४० हजार घुससहित प’क्रा’उ
अमेरिकामा नेपाली गणितज्ञहरुको छाता संगठन सम्मेलन गर्ने तयारी
बाबुरामलाई करिश्माको प्रश्न( यही हो राजनीतिक संस्कार ?
आजवाट नेपालमा पनि कोरोना विरुद्धको खोप
२४ घन्टामा ३ हजार ७९० जनामा कोरोना संक्रमण, १८ को मृत्यु
Posted on ३ कार्तिक २०७७, सोमबार १६:३७ Author Gaunbeshi
एक लाख घुससहित पक्राउ परेकी सहायक रजिष्ट्रारलाई चार महिना कैद
Posted on २५ आश्विन २०७७, आईतवार १६:१६ Author Gaunbeshi
‘चीनले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको छ भने संघीय सरकारले सम्वाद गरेर फिर्ता ल्याउनुपर्छ’ : मुख्यमन्त्री शाही
Posted on ४ कार्तिक २०७७, मंगलवार १४:२२ Author Gaunbeshi